နည်းပညာ မှတ်တမ်း: အခြေခံကွန်ပျူတာ(၁)
Part of the Computer Motherboard For beginning computer users, the computer aisles at an electronics store can be quiteamystery, not to mention overwhelming. However, computers really aren't that mysterious. All types of computers consist of two basic parts – hardware and software.
ကွန်ပျူတာ အခြေခံအရင်းအမြစ်အနေနဲ့ အခုမှ ကွန်ပျူတာကို စတင် လေ့လာမယ့် သူအနေနဲ့ သိထားသင့်တာကတော့၊ ကွန်ပျူတာဟာ လျှပ်စစ်နဲ့ဓာတ်အားနဲ့ လည်ပတ်တာဆိုတော့ သူရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ လျှို့ဝှက်နက်နဲ့ပုံ၊ ကွန်ပျူတာဖြင့် အရာရာကို ဖန်တီးနိုင်တယ်လို့တော့ ပြောလို့တော့ မရဘူးပေါ့၊ ဒါလည်း သူနေရာနှင့် သူပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျူတာဟာ အမှန်တကယ် လျှိုဝှက်နက်နဲ့မှုတွေရှိမနေဘူးလား?
အခြေခံအား ကွန်ပျူတာများကို အစိတ်အပိုင်းနှစ်မျိုးဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ... အဲဒါကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ(စက်ပိုင်း) Hardware၊ ပရိုပရမ်များ (Software ) စက်လည်စေသောစနစ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ အသုံးချ program များ။
(စက်နှင့် စက်ကို မောင်းနှင်မည့် စနစ်) hardware and software.
Hardware is any part of your computer that hasaphysical structure, such as the computer monitor or keyboard. If you can touch it, it is hardware. Software is any set of instructions that tells the hardware what to do. It is what guides the hardware and tells it how to accomplish each task.
Hardware စက်ပိုင်းဆိုတာက ကွန်ပျူတာရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်ပုံပါဘဲ၊ တနည်းပြောရရင် Monitor (အပေါ်စက်) ၊ keyboard (ကွန်ပျူတာ လက်နှိပ်ခုံ)၊ အဲဒါတွေကို လက်နဲ့ထိကြည့်၊ ကိုင်ကြည်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ အဲဒါတွေဟာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေ့ါ (hardware) ၊
Software ဆိုတာကတော့ ညွှန်ကြားချက်အစီအစဉ်တွေပါဘဲ ၄င်းကနေပြီးတော့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ပါတယ် ၊ Software ကနေပြီတော့ hardware ကို လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းဆီကို ဘယ်လိုလုပ်ဆိုပြီး ညွှန်ကြားမှုတွေပေးတဲ့ အတိုင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှပြီးဆုံးအောင်လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။
Anything you buy for your computer can be classified as either hardware or software. Once you learn more about these items, computers are actually very straightforward.
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို သင်ဝယ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်ဟာကတော့ ရုပ်ပိုင်း၊ ဘယ်ဟာကတော့ Software ပိုင်းဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပြီပေါ့။
The first electronic computer, the Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), was developed in 1946. It measured 18 feet by 80 feet and weighed 30 tons.
ပထမဆုံး လျှပ်စစ်ကွန်ပျူတာက 1946ခုနှစ်မှာ စပြီးတီထွင်ခဲ့ပြီတော့ ထုတည်က 18 ပေ မြင့်ပြီး တန် 30 လောက်အလေးချိန် ရှိခဲ့ပါတယ်။
Posted by kyaw min thein at 10:10 PM
Networking ဆိုတာဘာလဲ၊ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်... ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကွန်ပျူတာများ၊ Networking ဆိုတာ ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံး (သို့) အဲဒီထက်အမျာြး...
မေးခွန်း။ကြိုးမဲ့ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်မှုဆိုတာဘာလဲ။ အဖြေ။ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်ဆိုတာ ဘက်စုံသုံး အင်တာနက်ချိတ် Modern ဖြင့် ကြိုးဖြင့်ချိတ...
Computers Simplified Part of the Computer Motherboard For beginning computer users, the computer aisles at an electronics sto...
Networking HR တစ်ယောက်အဖြစ် အသက်မွေးမယ်ဆိုရင် နောက်ပိ်ုင်းမှာ အခြေအနေအများကြီး ကောင်းနိုင်တယ်၊ ဘာကြောင်းလည်းဆိုတော့ Network တပ်ဆင်ခြင်း၊...
လူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာ ရေပန်းစားတာက Mobile phone ပါ။ ဟုတ်ပါပြီ ဒီ လူတိုင်းလက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဖုန်းကို ဘာတွေ အသုံးတည့်နေသလဲ မေးစရာမေးခွန်းရှိ...
What are the Different Types of Computers? There are many types of computers, but personal computers such as desktop and laptop compu...
What isaComputer? A computer is an electronic device that manipulates information or "data." It has the ability to sto...
Challenge! Think about the activities you perform or want to perform usingacomputer (email, online shopping, etc.). Think ab...
An operating system is the most important software that runs onacomputer. You might be thinking, “OK, but what is soft...
kyaw min thein